" မိခင်​ကြီးဆုံးရှုံးပြီးတာကြောင့် ဖခင်ကြီးကိုအိမ်သို့ခေါ်ယူကာအတိုးချချစ်ပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မြဲသာ'' - Cele Gabar
Home/Cele Lifestyle/” မိခင်​ကြီးဆုံးရှုံးပြီးတာကြောင့် ဖခင်ကြီးကိုအိမ်သို့ခေါ်ယူကာအတိုးချချစ်ပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မြဲသာ”
” မိခင်​ကြီးဆုံးရှုံးပြီးတာကြောင့် ဖခင်ကြီးကိုအိမ်သို့ခေါ်ယူကာအတိုးချချစ်ပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မြဲသာ”
Koe4days ago	Cele Lifestyle
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်မြဲသာကတော့ ဂီတလောကမှာ တေးသံရှင်တွေတော်တော်များများရဲ့လက်ဦးဆရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မက်ဆုံရာကအဆိုရှင်တော်တော်များများကိုလည်း သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ဂီတဆရာတစ်ယောက်ပါ။
မကြာသေးမီးကမိခင်ကြီးဆုံးရှုံးပြီးနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အခုချိန်မှာမိဘနှစ်ဦးထဲကကျန်ရစ်သူဖခင်ကြီးကိုသူ့အိမ်သိူ့ခေါ်ယူကာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေကြောင်းကို”မိဘများသည် သားသမီးများအတွက် တန်ခိုးရှင်များဖြစ်ကြသည်.. လက်တွေ့ ပါ.. ကျွန်တော့်အတွက် အတိုးချချစ်ဖို့ အဖေပဲရှိတော့တာ မို့လို့ အနားကိုခေါ်ထားလိုက်တယ်.. ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင် လည်း ပြီး သွား ရော.. သတင်းထူးလည်းလာပါလေရော.. ထူးဆန်းလွန်းပါတယ်. အဖေအမေတို့ရဲ့ တန်ခိုးတွေ..”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်လာခဲ့တာပါ။
တကယ့်ကိုမိဘအပေါ်သိတတ်လွန်းတဲ့ ခိုင်မြဲသာကတော့ မိခင်ကြီးမဆုံးခင်မှာလည်းနေ့မအား ည မအားပြုစုခဲ့သူပါ။CeleGabarပရိသတ်ကြီးလည်း ခိုင်မြဲသာရဲ့မိဘတွေအပေါ်သိတတ်လွန်းတဲ့စိတ်လေးကိုသဘောကျရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” မိခင္​ႀကီးဆုံးရႈံးၿပီးတာေၾကာင့္ ဖခင္ႀကီးကိုအိမ္သို႔ေခၚယူကာအတိုးခ်ခ်စ္ၿပီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္ၿမဲသာ”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ခိုင္ၿမဲသာကေတာ့ ဂီတေလာကမွာ ေတးသံရွင္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕လက္ဦးဆရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္မက္ဆုံရာကအဆိုရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဂီတဆရာတစ္ေယာက္ပါ။
မၾကာေသးမီးကမိခင္ႀကီးဆုံးရႈံးၿပီးေနာက္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ အခုခ်ိန္မွာမိဘႏွစ္ဦးထဲကက်န္ရစ္သူဖခင္ႀကီးကိုသူ႔အိမ္သိူ႔ေခၚယူကာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းကို”မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တန္ခိုးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္.. လက္ေတြ႕ ပါ.. ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အတိုးခ်ခ်စ္ဖို႔ အေဖပဲရွိေတာ့တာ မို႔လို႔ အနားကိုေခၚထားလိုက္တယ္.. ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ လည္း ၿပီး သြား ေရာ.. သတင္းထူးလည္းလာပါေလေရာ.. ထူးဆန္းလြန္းပါတယ္. အေဖအေမတို႔ရဲ႕ တန္ခိုးေတြ..”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာတင္လာခဲ့တာပါ။
တကယ့္ကိုမိဘအေပၚသိတတ္လြန္းတဲ့ ခိုင္ၿမဲသာကေတာ့ မိခင္ႀကီးမဆုံးခင္မွာလည္းေန႔မအား ည မအားျပဳစုခဲ့သူပါ။CeleGabarပရိသတ္ႀကီးလည္း ခိုင္ၿမဲသာရဲ႕မိဘေတြအေပၚသိတတ္လြန္းတဲ့စိတ္ေလးကိုသေဘာက်ရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous ” တော်ရုံလူတွေဖူး​မျှော်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့တဲ့မေကဗျာ”
Next ” အကြားအာရုံ၊ အမြင်အာရုံ၊ ကိုယ်လက် အင်္ဂ ါ၊ ဆွံ့အ၊ မသန်စွမ်း ကလေး အယောက် (၁၈၀)တို့အား လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ”